သိုးများက လူသားတို့၏ မျက်နှာများကို မှတ်မိနိုင်စွမ်းရှိ - Yangon Media Group
လေ့လာဆန်းစစ်မှုတစ်ခုအရ သိုးတစ် ကောင်က အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်နေသည့် လူသားတို့၏မျက်နှာများ မှတ်မိနိုင်သည့်အရည်အ သွေးကို ပြသခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်မှ သုတေသီတို့သည် လေ့ကျင့်ပေးထားသောသိုးတစ်ကောင် ရုပ်ရှင်မင်းသား ဂျိတ်ဂိုင်းလင်ဟားလ်၊ မင်းသမီး အမ်မာဝပ်ဆန်နှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု သမ္မတဟောင်း ဘားရက်အိုဘားမားတို့၏ မျက်နှာများကို ခွဲခြားရွေးချယ်ပေးနိုင်ကြောင်း ပြသခဲ့ကြသည်။
လေ့ကျင့်ပေးထားသောသိုးက ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုမရှိသောသူများကြားထဲမှ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သော မျက်နှာပိုင်ရှင်တို့၏ဓာတ်ပုံများကို ရွေးထုတ်ပေးခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ သုတေသီတို့၏ သရုပ်ပြပွဲတွင် တွေ့ရှိမှုအရ သိုးများသည် ဆင်တူသောမျက်နှာကို မှတ်မိသည့်အရည်အသွေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားကြသည်ကို တွေ့ရှိ ရသည်။
ယခင်က လေ့လာစမ်းသပ်မှုတွင် တွေ့ရှိ ချက်အရ သိုးများသည် သူတို့သိထားသည့် လူသားနှင့် အခြားသောသိုးများကို ခွဲခြားရွေးချယ်နိုင်ကြသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ သုတေသီတို့က သိုးမရှစ်ကောင်ကို လေ့ကျင့်သင်ကြား ပေးပြီး ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခြင်းမရှိသည့် လူသားမျက်နှာရုပ်ပုံများထဲမှ နာမည်ကျော်လေးဦး၏ ရုပ်ပုံကို ခွဲခြားရွေးထုတ်စေခြင်းဖြင့် ဆုလာဘ်အဖြစ် ပေါင်မုန့်များကို ကျွေးမွေးခဲ့သည်။
Ref: Science news
သီလဝါ စီးပွားရေးဇုန်နှင့် ဆက်စပ်သည့် လယ်မြေ ၆ဝ၆ ဧကအနက် ဦးပိုင်မှ ဒုတိယအကြိမ် အဖြစ် ၆၈ ဧကအာ?
သက်ရှိခြင်ကို အသုံးပြုပြီး ခြင်ကောင်ရေ တိုးပွားမှုကို ထိန်းချုပ်
မြဝတီမြို့၌ အမှိုက်များ စွန့်ပစ်သည့် နေရာသို့ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှ တရားမဝင် ကျူးကျော် ခြံခတ်ြ??